Biju Subedi — Tue, 12/05/2017 - 22:00
—भोट कहाँ खसाल्नुहुन्छ ?
—मत पेटिकामा ।
—छाप कहाँ राख्नुहुन्छ नि ?
—भोट कसलाई दिनुहुन्छ ?
—तपाईं त साह्रै बाठो हुनुहुन्छ ।
—यही त हो नि गोप्य मतदान भनेको ।
—भन्दा फरक पर्छ र ?
—पर्छ नि ! किन चित्त नबुझेकाहरुसँग बैरभाव गर्ने । बरु तपाईं पनि गोप्य नै राख्नुहोस् ।
—अनि पछि जो जित्यो उसैलाई राखेको भन्नलाई ?
—त्यस्तो पनि होइन । यो अधिकारको प्रयोग हो । यो मौलिक हकअन्तर्गत पर्दछ ।
—अनि बहिस्कारवादीजस्तो देखियो नि ? के भन्नुहुन्छ यसबारेमा ? अब त फस्नुभो तपाईं ।
HomSuvedi — Mon, 11/27/2017 - 16:54
(सुधिरकुमार सुमनजीले मेरो कथामा कमेन्ट गरेपछि जन्मेको लघुकथा)
कुलबहादुरको घरमा आएको बेला थियो । किनमेलनका लागि आज पनि फेरि बजार गए । दुरदराजको जागिर छ । श्रीमतीमालाई दुःख नहोस् भन्ने सोच भएकाले आएको मौकामा सबै थोक जोरजाम गरी घरमा राखिदिने उनको बानी छ ।
हुनत उनका लागि किनमेल गरिने वस्तुहरु धनबहादुरको छैनन् फलफूलकाे दोकान छाडेका छन् तापनि पहिलेका नजिकका साथी भएको नाताले बजार जाँदा आज पनि धनबहादुरको पसलमा निस्कने विचार गरे ।
HomSuvedi — Sat, 11/25/2017 - 07:26
मालिकको भासन खेसरियाले सबै ता बुझेन तैपनि आफ्ना मालिकले गरेको भासन रामरी सुन्यो । मालिक धनमान साहूकोमा कामका लागि बसेको केटो हो खेसरिया । को हो, कसको छोरो हो भनेर बुझ्न उसको नाम नै काफी भएकोले त्यता नलागी खास कुरामा लागौं ।
HomSuvedi — Mon, 11/13/2017 - 13:22
लघुकथाः मोबाइलबाट सुविधा
बेला बेला मोबाइलमा उनी मुसुक्क पनि गर्थे र फटाफटी आफ्ना अम्ला चलाएर अर्को मुस्कानका लागि पर्खिएजस्तो गर्थे ! नजिकै बसेर उनकी पत्नी स्वेटर बुनिरहेकी थिइन् र उनका पतिको यो दशालाई निकै गम्भीर रुपमा हेरिरहेकी थिइन् । यो उनका पतिको नित्यकर्म जस्तै भएको थियो । उनी भन्दा पनि मोबाइल प्यारो हुन थालेको थियो । केही कुरा भन्न खोज्दा उनका पति यसो “हाँ हुँ !” मा टारिदिन्थे र ध्यान उही मोबाइलमा पुगाउँथे । कुनै बेला ता अलिक झर्कन्थे पनि । यसैले सविता अलिक होसियारीका साथ बोल्दथिन् । अहिले भने अलिक हिम्मत गरेर सेधिन् “कसका साथ कुरा चलिरहेका छन् हजुरका ?”
HomSuvedi — Sat, 11/11/2017 - 20:23
"लौ है मन्त्रीज्यूतर्फबाट सिफारिस आयो । नपारी हुन्न अब उहाँको मान्छेलाई ।” आयोगका अध्यक्षले छनोट समितिलाई फोन रिसिभ गरिसकेर भने ।
“हामीले नाम तयार पारेर परिणाम घोषणा गर्न मात्र बाँकी थियो । यस्तो अवस्थामा अब कसको नाम कटाउनु होला ?" अन्तर्वार्तामा सामेल एक सदस्यले अलिक चिन्ता भएजस्तो गरी भने ।
“हेर्नुहोस् जसरी भए पनि मन्त्रीजीको सिफारिसलाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । जसरी पनि समावेश गर्नै पर्छ ।” अध्यक्षले बडो लाचारीका साथ कुरा राखे ।
यसरी अध्यक्षले नै भनेपछि अन्तर्वार्ताटिम पनि तयार भइसकेका नामहरुमा लाग्यो पुनः विचार गर्नतिर ।
सुवास “दीप” — Tue, 10/31/2017 - 09:02
उसले आफूलाई बडेमानको न्याउरीमुसो सम्झियो र सर्पमाथि जाइलाग्यो।
Biju Subedi — Sun, 10/22/2017 - 23:42
गजल - भीम के सी कमल
म अभागी जन्मिएँ “अध्याय-६ उनको प्रतिबिम्व”
२.छन्दशास्त्रका लेखनका बारेमा केही कुराहरुः
२०४० सालतिर लेखेकाे मेरो लामाे कविताकाे अारम्भका केही पद्यहरु
आफ्नै परिवार सम्झेर
स्तनपान सप्ताहका लागि
दश मुक्तक (सृष्टिकर्म)
सायोनाराका दुई थोपा आँशु